चिकित्सकको लाहपरबाहीले सुत्केरी भएको १२ दिनसम्म गुप्ताङ्गभित्रै प्याड ! – Nepali Audio Video
चिकित्सकको लाहपरबाहीले सुत्केरी भएको १२ दिनसम्म गुप्ताङ्गभित्रै प्याड !
स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण यहाँकी एक सुत्केरी महिलाले सास्ती खेप्नुपरेको छ। जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका—१ कुश्मीसेराकी सुस्मा थापा मगरले धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण सास्ती खेप्न बाध्य भएकी हुन्।
सुत्केरीको घाउ निको हुनुपर्ने समयमा सही नसक्नु पीडा हुन थालेपछि उनले यो कुरा अरुलाई सुनाईन्। उनको कुरा सुनेर कतिले उनलाई गिज्याए, ‘यस्तो बेलामा अलि अलि पीडा त भैहाल्छ नी, अलिअलि दुख्दा पनि सहनै नसक्ने ?’ उनीप्रति उल्टो प्रश्न तेर्सियो। दुःखाई बढ्दै जाने र पिसाब गर्नका लागि पनि समस्या भएपछि स्वास्थ्यकर्मीसंग परामर्श गरिन् । परिवारले पनि सामान्य होला भन्ने ठानेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा दुःखाई कम गर्ने औषधी खुवाए, तर दुखाई बीसको उन्नाईस भएन। घाउ निको हुने समयमा उल्टै योनीद्वारबाट पिप जस्तो अत्यन्त गन्हाउने पानी बग्न थाल्यो। त्रसित भएको परिवारले अस्पतालमा पुनः जँचाउन जाँदा पत्ता लाग्यो, उनको त योनीभित्रै प्याड छोडिएको रहेछ। सुत्केरी भएपछि बढी रगत बग्न नदिनबाट जोगाउनका लागि योनीभित्र राखिएको प्याड स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण भित्रै छोडिएपछि सुस्माले १२ दिनसम्म पीडा खेप्नु परेको हो।
स्वास्थ्यकर्मीको लाहपरबाहीले गर्दा अस्पतालप्रतिको विश्वास समेत घटेको उनी बताउँछन्। ‘हामी डाक्टरहरुलाई भगवान ठानेर अस्पतालमा आउँछौं, उनीहरुकै गल्तीले थप दुःख पाउनु परेको छ,’ थापा भन्छन्,‘ सोध्दा उल्टै झर्केपछि हामीले अस्पतालप्रति कसरी विश्वास गर्नु?’
यस घटनाबारे अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सागर राज भण्डारीले आफू अनविज्ञ रहेको बताए। ‘सुत्केरी भएपछि धेरै रगत बग्न सक्ने हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि प्याडको प्रयोग गर्ने गरिन्छ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘प्याड भित्रै छोडिएको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन। म यसबारे बुझ्छु।’